>ဒါဘယ်သူပြောခဲ့တာလဲ? | ချမ်းလင်းနေ
Filed under: ဘာသာပြန် —9Comments	February 18, 2011
Source : Poe C ဆက်လက်ကြိုးစားပါဦးမည်။ © ချမ်းလင်းနေ
9 Comments: May everybody be happy and healthy!
February 18, 2011 at 7:41 am	>ညီမလေး ပထမဆုံး အားပေးသွားပါတယ်အကို
February 18, 2011 at 10:05 am	>သိနေသလိုပဲ … ဒါပေမယ့် စဉ်းစားမရဘူး .. ကိုချမ်းရာ …း)
February 18, 2011 at 12:36 pm	>အဲ့ဒီ စာရေးဆရာက ဘူလဲ ဟင်…သားသား တော့ သိဝူး။ အဖြေ ရေးမဲ့ နေ့ စောင့် နေမယ်ဗျား)
February 18, 2011 at 1:44 pm	>ကိုချမ်းရေ စဉ်းစားလို့မရဘူး၊ ဧကန္တတော့ ကိုချမ်းပဲလား မသိပါဘူး၊ ဟုတ်တယ်မလား၊ လော့ကပ်သီးကို နားမလည်လို့ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ ထိုင်နေတဲ့ အခန်းဖော်သူငယ်ချင်းတစ်ပါးကို လှမ်းမေးလိုက်ရသေးတယ်။ ကိုချမ်းလည်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေခင်ဗျာ…
February 18, 2011 at 9:53 pm	>သိကိုမသိဘူး…..အဖြေပြောပြဖို့မမေ့နဲ့ဦးနော်…..:)
February 19, 2011 at 1:35 am	>တကယ်ကို မသိဘူးဂျ …အဖြေကိုစောင့်နေမယ်နော် …
February 20, 2011 at 8:05 am	>အင်း…အဲ့ ဒီ ကောက်နမ်းလိုက်တဲ့တစ်ကွက်နဲ့ တင် ..ရိုမက်တစ် ဖြစ်နေပြီ။ ဘယ်သူရေးတာ ဆိုတာတော့ရှေ့ က တက်နေတဲ့ခံစားကြည့်မိတာတွေ ပေါ့ မှာစိုးလို့မစဉ်းစားတော့ ပဲ အဲ့ ဒီရိုမက်တစ် ကလေးအတိုင်း ပြန်သွားခဲ့ ပါတယ်အကိုလင်း..။
February 20, 2011 at 9:51 am	>ဘယ်သူပြောခဲ့တယ်ဆိုတာထက် စာတပုဒ်ကို စေ့စေ့စပ်စပ် လေ့လာဝေဖန်ပုံလေး ပိုသဘောကျမိတယ်။ စာရေးသူတွေအတွက် မှတ်သားထားသင့်တဲ့အချက်ပါပဲ။
February 22, 2011 at 9:24 am	>ကျွန်တော်လဲမသိဘူး။အဲဒီဇာတ်ကောင်နေရာမှာဆိုရင်ကိုချမ်းကရောလော့ကပ်သီးကလေးကိုဒီအတိုင်းပဲနမ်းလိုက်မှာလားလို့ ပြန်မေးသွားပါတယ်။ပျော်ရွှင်ပါစေ။
« >ဘကုန်းနဲ့ ဘလောက်ဂါများ
>ဆရာအောင်သင်း၏ စာပေဟောပြောပွဲများ »